Myanmar Actor, Model Boy and Popular Hip-hop singer, Sai Sai Khan Hlaing
Home » Sai Sai Khan Hlaing » Myanmar Actor, Model Boy and Popular Hip-hop singer, Sai Sai Khan Hlaing
#Sai Sai Khan Hlaing
Sai Sai Kham Hlaing or Sai Sai Kham Leng (born 10 April 1979) isapopular Burmese singer-songwriter, model and actor. He is best known for his hip hop music. Sai Sai is one of the Myanmar famous celebrities. Sai Sai moved to Yangon in 1996, signed with John's modeling agency, and becameamale model. His first foray into the Burmese music scene Chocolate Yaung Yayge Einmet (Chocolate-Coloured Ice Dreams) was largelyafailure. But his second album Thangegyin Mya Zwa (Many Friends) made himasuperstar in Myanmar, attractingalarge female (teenage) following ever since. Sai Sai Kham Hlaing has been released6solo music albums. Sai Sai Khan Hlaing is the boyfriend of Myanmar Cute Model Girl, Wut Hmone Shwe Yee.
See Music Video of Han Tun, Called "Yin Khone Bat Thoe Tan Chin". Myanmar popular hip hop singer and actor, Sai Sai Khan Hlaing and Myanmar cute model girl, Wut Hmone Shwe Yee starred in this music video.
Sai Sai Khan Hlaing, Myanmar Well-known Hip-hop Singer, Actor, Model Boy
မြန်မာ ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ၊ စာရေးဆရာ၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် မော်ဒယ် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ပါ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် က 1979 မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ အနုပညာလောကထဲ ကို မော်ဒယ်ဘိုင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ 1996 မှာ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ တာပါ။ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော် သီချင်းခွေဖြစ်တဲ့ ' ချောကလတ်ရောင် အိမ်မက်' ကို ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး အဆိုတော်လောကထဲကို ၀င်လာခဲ့သူပါ။ ဒီပထမဆုံးခွေက မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ 'သူငယ်ချင်းများစွာ' ဆိုတဲ့ ဒုတိယ အခွေမှာ တော့ တော်တော်လေး ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်း ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခုရလာတယ် လို့ဆိုရမှာ ပါ။ အခုဆိုရင် စိုင်းစိုင်းက တစ်ကိုယ်တော် သီချင်းခွေ ၆ ခွေ ဖြန့်ချီပြီးပါပြီ ၊ ဟစ်ဟော့ အဆိုတော်တစ်ယောက် အနေနဲ့ရော၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ပါ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေဆဲပါ။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က မြန်မာ မော်ဒယ် ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ ရည်စားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော် ဟန်ထွန်း ရဲ့ "ရင်ခုန်ဘက်သို့ တမ်းချင်း" သီချင်းဗီဒီယိုလေးကို ဒီမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နှင့် မော်ဒယ် ၀တ်မှုန်ရွှေရည် တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား ပါတယ်။